त्यो फ्लेक्स्, यो मेताफर! – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (२९ साउन-३ भदौ, २०७४) बाट
यसपालिको ‘आपत्ति’ रह्यो– १५औं मन्त्रीस्तरीय बिम्स्टेक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा डाएस पछाडि राखिएको तुल । कुनै हतारमा गरिएको गोष्ठीमा जस्तो गरी (शायद टेपले) सोल्टी होटलको ‘मेघामल्हार हल’ को भित्तामा तुल टाँसिएको छ । डिजाइन–डेकोरको कुनै पर्वाह छैन, बेरेर ल्याइएको फ्लेक्स् खोल्दाको पाटे दाग समेत सबैले देख्ने गरी ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको बेहालबारे यहाँ चर्चा नगरौं, यति मात्र भनौं कि छिमेक र अन्यले के भन्छन् भन्दै दुम्की–दुम्की, डराई–डराई, परिचालित छ यो नीति नेतृत्व तहमा । अन्य तहमा लापर्वाहीको बिगबिगी छ । नेता र कर्मचारीले ध्यान नदिंदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ मुलुकको गरिमा र ‘स्ट्यान्डिङ्ग’ गिरेको छ । त्यहाँ उपस्थित बिम्स्टेक मित्रराष्ट्रका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका प्रतिनिधिहरूले त्यो फ्लेक्स् हेरेर नेपालबारे के धारणा बनाए होलान् ?
त्यो फ्लेक्स् बनाउने, टाँग्ने जिम्मा पक्कै परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीको थियो । के उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू कसरी संचालन हुन्छ, देखेका थिएनन् ? उनलाई ‘सुपरभाइज्’ गर्ने अफिसरदेखि परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीसम्मलाई त्यो तुल ठीकै लागेको हो ? मलाई भने त्यो फ्लेक्स्ले नेपालको बिजोग दर्शाएको भन्ने लागेको छ । यस्तो बिजोग त लुकी–लुकी खपौंला, तर संसारसामु पेश गर्नुहुँदैनथ्यो । एउटा न्यूनतम ‘सोफिस्टिकेशन्’ को माग राख्दछ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विधाले । त्यसैले हो त्यो तुल र तुलले जनाएको लापर्वाहीबारे कोकोहोलो गरेको । मेटाफर भन्नुस् वा बिम्ब, त्यो फ्लेक्स्ले गहिरो अर्थ राख्दछ ।
बिम्स्टेकसँग सम्बन्धित यी दुई घटना (तुल र तस्वीर) प्रतिनिधिमूलक हुन्, कि कसरी शासक वर्ग र कर्मचारीतन्त्रका कतिपयले नेपालको इतिहास, कूटनीति, जनभावनाको वजन बोक्न जानेका रहेनछन् । जबसम्म हामी यस्ता ‘सामान्य’ कुरा बारे चिन्तित हुँदैनौं र ‘यस्तै हो, चल्ता हे’ भन्दै धूलो बढारेर सतरन्जा मुनि लुकाउँछौं, सुधारको अपेक्षा नगरे हुन्छ । अतः गोवाको तस्वीर खिच्ने व्यक्ति होस् वा त्यो फ्लेक्स् टाँग्ने व्यक्ति, कुरा ठूलो होस् या सानै, जवाफदेही खोज्नै पर्छ ।